Global Voices teny Malagasy » Herintaona Taorian’ny Fandraràna Gazety Iray, Mbola Atao Fahirano Hatrany Ny Media Tsy Miankina Ao Oman · Global Voices teny Malagasy » Print
Herintaona Taorian'ny Fandraràna Gazety Iray, Mbola Atao Fahirano Hatrany Ny Media Tsy Miankina Ao Oman
Voadika ny 27 Oktobra 2017 5:12 GMT 1	 · Mpanoratra Gulf Center for Human Rights Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Oman, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
“Naaton'ny fanapahan-kevitry ny minisitry ny fampahalalam-baovao ny tranonkala”, filazana tao amin'ny pejy fandraisan'ny gazety Azamn voaràra.
Efa maherin'ny herintaona izao no nakaton'ny manampahefana Omeniana ny gazety tsy miankina Azamn amin'ny teny Arabo noho ny fitaterana ataony mikasika ny kolikoly ao amin'ny Soltanà. Mbola any am-ponja, mamita sazy herintaona an-tranomaizina i Yousef Al-Haj , iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny gazety. Tonian-dahatsoratra roa hafa ao amin'ny Azamn, Ibrahim Al-Maamari sy Zaher Al-Abri no nogadraina ihany koa ary niakatra fitsarana, saingy navotsotra ihany taty aoriana.
Notantanan'ny Sultan Qaboos bin Said nanomboka ny taona 1970 i Oman, tonga teo amin'ny fitondrana izy rehefa nanongana ny rainy, Said Ben Timor. Nanomboka tamin'io fotoana io, nitàna ireo toerana lehibe indrindra tao amin'ny firenena ankoatra ny maha Sultan azy izy: Praiminisitra, Minisitry ny Fiarovana, Mpitarika Faratampon'ny tafika, minisitry ny fitantanam-bola, minisitry ny raharaham-bahiny, filohan'ny Filankevitra Ambonin'ny Drafitrasa, ary Filohan'ny Banky Foibe.
Ny taona maro nandritra ny fitondrana  Sultan dia niavaka tamin'ny ezaka mitohy ataon'ny mpitandro filaminana, indrindra ny Sampan-draharaham-piarovana Anatiny (ISS), mba haka an-keriny ny fahalalahan'ny olom-pirenena, anisan'izany ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, ny fampijaliana  sy fampitahorana ireo mpiaro ny zon'olombelona , ​​mpanao gazety tsy miankina, bilaogera sy mpikatroka hafa, ary ny fanagadrana azy ireo. Matetika mametra  ireo hetsika milamina sy ara-drariny eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona ny manampahefana ary manakana ny olom-pirenena, anisan'izany ireo mpikatroka, mba tsy haneho malalaka ny hevitr'izy ireo – na an-tserasera na ivelan'ny aterineto – momba ny raharaham-bahoaka ao amin'ny fireneny toy ny kolikoly ao amin'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny andrim-panjakana.
Famelezana goavana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny firenena ny fikendrena sy ny fanakatonana ny gazety Azamn ary ny famonjàna ireo tonian-dahatsoratra telo tamin'ny herintaona. Gazety tsy miankina izay nitatitra momba ny kolikoly ao Oman (izay governemanta tsy refesi-mandidy tanteraka) hatramin'ny nanorenana azy tamin'ny taona 2007 ka mandra-paha voaràran'ny manampahefana azy tamin'ny volana Aogositra 2016 ny gazety Azamn .
Ny 28 Jolay 2016, nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Ibrahim Al-Maamari, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Azamn, rehefa namoaka lahatsoratra ny gazety tamin'ny 26 Jolay 2016 mitondra ny lohateny hoe “ireo antoko faratampony mamatotra ny tanan'ny fitsarana”, izay niresaka momba ny kolikoly ao amin'ny fitsarana, ny fitsabahan'ny manampahefana ambony amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Ampangain'ny tatitra ireo manampahefam-panjakana ho manao fanerena ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony ao amin'ny firenena mba hamadika didim-pitsarana amin'ny raharaha fandovàna.
Gazety Azamn tamin'ny 26 Jolay, 2016, nanasongadina lohateny lehibe tao amin'ny pejy voalohany: “ny antoko faratampony mamatotra ny fitsarana”. Loharanon-tsary: ​​pejy Facebook-n'ny Azamn
Tamin'ny 3 Aogositra 2016, nampanantsoin'ny ny ISS i Zaher Al-Abri, mpikambana ao amin'ny komitin'ny famoahan-dahatsoratra mba ho avy ao amin'ny Diviziona Manokana, ary nogadraina izy rehefa tonga tany. Ny 09 Aogositra 2016, nosamborin'ny ISS ny tonian-dahatsoratra lefitra Yousef Al-Haj, izay niasa ho lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety taorian'ny fisamborana an'i Al-Maamari. Nakatona maharitra ny gazety raha vao nanome baiko ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao fa “tsy mahazo alàlana ny famoahana sy ny fivezivezen'ny gazety amin'ny fomba rehetra, manomboka amin'ny 9 Aogositra 2016.”
Ny 26 septambra 2016, nanatontosa fotoam-pitsarana farany an'i Al-Maamari, Al-Haj, sy Al-Abri ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Muscat, ary namoaka sazy am-ponja azy ireo. Nandidy ny gazety mba hikatona mandritra ny fotoana maharitra ihany koa ny fitsarana. Samy voaheloka noho ny “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka”, “fampiasana tsy ara-dalàna ny aterineto”, “famoahana antsipirihany ny raharaha sivily”, ary “manohintohina ny lazan'ny fanjakana” i Al-Maamari sy Al-Haj. Mbola hita fa voaheloka noho ny fanitsakitsahana ny fandraràna famoahan-dahatsoratra sy noho ny fanendrikendrehanaa ihany koa i Al-Haj. Samy voasazy telo taona am-ponja, onitra 3000 Omani Riyals (7 800 dolara amerikana) ary voaràra tsy mahazo manao mpanao gazety mandritra ny herintaona izy mirahalahy. Voasazy higadra herintaona sy onitra arivo Riyals (2600 dolara amerikana) kosa i Al-Abri rehefa nomelohina ho mampiasa “tambajotram-baovao [ny aterineto] ho fampielezana fitaovana mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka.” Nandoa onitra 5000 OR (13000 dolara amerikana) izy, ary efa navotsotra izy tamin'ny 22 Aogositra 2016 talohan'ny nanamelohana azy.
Nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'ny 26 Desambra 2016, noahafahan'ny  Fitsarana Ambony madiodio i Al-Haj raha voasazy herintaona an-tranomaizina kosa i Al-Haj ary enim-bolana an-tranomaizina i Al-Maamari, tafiditra ny fotoana efa lanin'izy ireo tany am-ponja. Navotsotra tao amin'ny Fonja Foibe tao Muscat i Al-Maamari tamin'ny 10 Aprily 2017 rehefa nahavita ny saziny enim-bolana, nandao an'i Al-Haj any am-ponja mbola mamita ny saziny herintaona.
Nofoanan'ny fitsarana ambony ihany koa ny fanapaha-kevitra hanakatona ny gazety “Azamn” izay navoakan'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao.
Na dia teo aza ny fanapahan-kevitry ny fitsarana hanaisotra ny fandraràna ny Azamn, mbola nanohy nanenjika ny gazety ny governemanta Omanita. Tamin'ny 8 Janoary 2017, namoaka didy nanitatra ny fanakatonana ny “Azamn” nandritra ny telo volana ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao. Ny 8 May 2017, nanasonia didy manokana hafa indray izay nanitatra ny fanakatonana ny “Azamn” nandritra ny telo volana fanampiny ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao – mbola nanohitra indray ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana mamela ny gazety hamoaka lahatsoratra.
Tsy ny fanakatonana ny Azamn ankehitriny sy ny fanenjehana ireo mpanao gazetiny no hany fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny gazety nitranga vao haingana tany Oman. Nisy ireo fanitsakitsahana hafa tahaka ny fanakanana  ny tranonkalan'ny gazetiboky tsy miankina Mowatin sy ny faneriterena ny Albalad, gazety an-tserasera voalohany tsy miankina ao amin'ny firenena, mba hampitsahatra ny asany.
Amin'ny fanakatonana hatrany an'ny Azamn sy ny fanagadrana ny mpanao gazetiny Al-Haj, toa mbola tsy te-hampitsahatra ny famoretana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny manampahefana Omanita.
The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) urges the authorities in Oman to:
1. Immediately and unconditionally release Yousef Al-Haj;
2. Provide a secure environment for Azamn newspaper to carry out its journalistic work;
3. Protect freedom of the press in the country; and
4. Ensure in all circumstances the ability of human rights defenders and journalists in Oman to carry out their legitimate human rights work without fear of retaliation and without any restrictions, including judicial harassment.
Mandrisika ny manampahefana ao Oman ny Foibe ao amin”ny Helodrano misahana ny Zon'Olombelona (GCHR) mba:
1. Hamotsotra avy hatrany sy tsy misy fepetra an'i Yousef Al-Haj;
2. Hanome tontolo azo antoka ho an'ny gazety Azamn mba hanatontosany ny asany fanaovan-gazety;
3. Hiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny firenena; ary
4. Miantoka ny fahafahan'ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanao gazety ao Oman amin'ny toe-javatra rehetra mba hanatanteraka ny asany ara-drariny momba ny zon'olombelona, ao anatin'ny tsy fisian'ny tahotra valifaty, tsy misy fameperana, anisan'izany ny fanorisorenana ara-pitsarana.
Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sady tsy mitady tombontsoa ara-bola ny Gulf Center for Human Rights  (GCHR) izay miasa manome fanohanana sy fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona (tafiditra amin'izany ny mpanao gazety tsy miankina, bilaogera, mpisolovava, sns.) ao amin'ny faritra Helodrano sy ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahalalahana maneho hevitra, ny fikambanana sy ny fivoriana am-pilaminana. Nosoratan'ny tale mpanatanteraka ao amin'ny GCHAR, Khalid Ibrahim  ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/27/106881/
 Yousef Al-Haj: https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/yousef-al-haj
 Sultan Qaboos bin Said : https://en.wikipedia.org/wiki/Qaboos_bin_Said_al_Said
 mpiaro ny zon'olombelona: https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/oman/session_23_-_november_2015/ishr_upr23_omn_e_main.pdf
 faneriterena : https://globalvoices.org/2016/11/03/in-oman-independent-media-suspended-until-further-notice/
 Gulf Center for Human Rights: http://<http://www.gc4hr.org/
 Khalid Ibrahim: https://twitter.com/khalidibrahim12